Fitaterana any Però
Però dia mpizaha tany mpizaha tany malaza, olona an'arivony no tonga eto isan-taona mba hijery ny tenan'izy ireo ny rafi-pitantanana miorina fahiny ao amin'ny Incas ary mankafy ny natiora Amerikana Latinina. Ho an'ireo mpandeha izay mikasa ny lalan-dry zareo, dia azo antoka fa mahasoa ny mahafantatra amin'ny alalan'izany fiara izany dia ho mora kokoa ny hahatongavana amin'ny teboka A mankany amin'ny toerany B. Ao anatin'ity famerenana ity dia hiezaka ny hamaritra amin'ny antsipiriany ireo safidy azo ampiasaina sy hamenoana ny nuances rehetra.
Inona no tokony ho fantatry ny mpizaha tany?
Aleo atombontsika amin'ny hoe ny hetsiky ny fiara ao amin'ny firenena dia zakany, ary ny fitsipiky ny fifamoivoizana dia tsy mitovy amin'ny fitsipika ao Eoropa na Etazonia. Misy ampahany sasany amin'ireo lalambe no aloa.
Ny mampiavaka ny firenena dia ny lalana tsy mahafa-po, ary any amin'ny toerana sasany, amin'ny fomba mahazatra, dia tsy misy mihitsy. Ny lalana eny an-tendrombohitra dia sahirana, tsy misy mihitsy ny marika famantarana sy lalana, izay mahatonga azy ho sarotra ny mandehandeha manerana ny firenena, amin'ny fotoan'ny orana dia afaka manakana ny fifamoivoizana eny eny an-dalambe eny amin'ireo tanàna lehibe sy toeram-ponenana ( Cuzco , Lima , Arequipa , Trujillo ).
Ny fihetsiketsehana ao an-tanàna dia manakorontana: famantarana famantarana, lozam-pifamoivoizana tsy dia fahita firy, ary ireo mpamily eo an-toerana dia tena mahery setra amin'ny fiarabe, saika tsy misy fanajana ny fitsipiky ny lalana. Amin'ny tranga maro, sarotra kokoa sy azo antoka kokoa ny fampiasana fitateram-bahoaka na taxi raha oharina amin'ny miezaka hiditra amin'ny toerana mety aminao.
Rehefa manomana ny lalanao, dia tadidio fa ilaina ny mandamina ny dia miaraka amin'ny tahiry, satria Ao Però matetika dia tsy hita ny fandaharam-potoana, maro ireo fitaterana fitaterana dia lavitra lavitra noho ny fandaharam-potoana, ary mora foana ny fandefasana ny bisy.
Buses any Però
Trano fitaterana mora sy tena lafo indrindra any Però. Afaka mividy tapakila amin'ny seranam-piara-migadra na any amin'ny seranam-piaramanidina ny sari-tany amin'ny seranam-piara-mivezivezy, na dia any amin'ny masoivohon'ny fiaramanidina aza ny vidiny dia mety ho avo be. Raha manomana fiaramanidina lavitra ianao, dia manoro hevitra ny hividy ny tapakila mialoha. Matetika dia bisikileta matetika ny bus eto Però ary amin'ny fotoana fandefasana dia tsy misy afaka malalaka malalaka. Ankoatra izany, manoro hevitra anao izahay handinika amim-pitandremana ny safidin'ny mpanentana, tk. Ao amin'ny orinasa maro fiara, teknolojia efa ela, ny hetsika izay tsy azo antoka.
Rehefa mandeha lavitra lavitra, mitazàna ny hitazona ny pasipaoronao miaraka aminao, satria amin'ny lalana sasantsasany ianao dia tsy maintsy mandalo ao amin'ireo lahatsoratra misy ny dokam-barotra, ary amin'ny orinasa sasany fiara tsy manolotra pasipaoro dia tsy afaka mivarotra ny tapakila fotsiny ianao. Raha manana entana miaraka aminao ianao, dia ataovy izay hahazoana antoka fa tsy misy rano Amin'ny ankapobeny, ny entana rehetra dia entina eny an-tampon'ny bus.
Ny fandehanana fiara fitateram-bahoaka mankany Però miaraka amina rindran-kaana dia azo antsoina hoe mahafinaritra, satria matetika izy ireo no marefo, miadana, tsy mifanaraka amin'ny fandaharam-potoana ny fifamoivoizana, fa tena lafo tokoa - ny vidin'ny lamasinina dia miankina amin'ny halaviran'ny lavitra. Ny fijanonana dia azo atao na aiza na aiza eny an-dalana amin'ny fanomezana ny mpamily famantarana amin'ny tànany na miteny hoe "Bajo". Ankoatra ny fiara fitateram-bahoaka ao Però dia efa mahazatra ihany koa ny fiaran-dalamby mahazatra, ny lafaoro dia lafo kokoa noho ny any anaty fiara fitateram-bidy, fa ny alakamisy dia ho tsara kokoa ny dia.
Ny taxi dia karazana hetsika mahazatra manerana ny firenena. Toy ny any amin'ny firenena hafa dia misy fiarakaretsaka ao Però afaka hita any amin'ny gara na seranam-piaramanidina, na amin'ny toeram-piompiana manokana. Tsara kokoa ny manaiky ny saran-dàlana mialoha ary hampiasa ny serivisy ho an'ny mpamatsy manana fahazoan-dàlana (taxi-mavo). Ankoatra ny fiarakaretsaka fiarakodia mahazatra, ao Però dia mahazatra sy moto- ary trishaws, mandeha amin'ny vidiny mora kokoa noho ny amin'ny taxi mahazatra.
Any Peroa, noho ny toetry ny tany, tsy azo atao amin'ny seranana ny fidirana amin'ny faritra maro, any amin'ny tanàna lehibe misy seranam-piaramanidina izay mandrindra ny sidina lavitra sy iraisam-pirenena.
Ny fiaran-dalamby no karazana fitaterana fanao isan-trano ao Però, noho izany dia miomàna hiatrika ny fifandimbiasana. Amin'ny ankapobeny, ireo mpizahantany vahiny dia voatery mandeha fiara tsy dia ambany noho ny kilasy faharoa na voalohany, fa raha voafetra ny tetibolanao na tsy misy fomba hafa, dia azo atao ny miala amin'ny toerana iray amin'ny firenena amin'ny iray hafa amin'ny fiaran-dalamby mahazatra ao Però, izay miomana amin'ny tsy fahampiana sy ny fahasarotana mety miaraka amin'ny fialana amin'ny entana.
Araka ny voalaza tetsy ambony, ny fahasamihafan-kery eo amin'ny firenena dia mahatonga azy ireo ho sarotra ny handratra an'io na amin'ity teboka ity, noho izany dia mahazatra io karazana fitaterana io, toy ny sambokely na sambokely. Ny serivisy amin'ity hetsika ity dia tsy misy mihitsy, fa matetika dia tsy misy safidy hafa ho an'ny mpandeha.
Matetika ny mpizahatany dia tsy manolotra hetsika mahaleotena noho ny toetry ny lalana sy ny fiara, fa raha tianao ny safidy, dia afaka manofa fiara ianao any amin'ny biraon'ny orinasam-pitaterana any amin'ny seranam-piaramanidina. Raha hanao sonia ny fifanarahana ianao dia mila ny zon'ireo fenitra iraisam-pirenena, karama fiantohana, bola na carte de dépôt, fanampiny, tokony ho 25 taona fara fahakeliny.
Araka ny hitanao amin'ity fanavaozana ity, dia azo atao ny mivezivezy mankany amin'ity firenena mistery ity ary afaka mahazo fampiononana ampy, ny zavatra rehetra dia miankina amin'ny fotoananao, ny tetibolam-panjakana ary ny safidinao. Ny safidin'ny fifamoivoizana any Però amin'ny mpizahatany dia, ary raha vonona ho an'ny fahasarotana sasantsasany ianao dia hahatsiaro fahatsiarovana mahafinaritra fotsiny ny olom-pantatra amin'ity firenena ity.
Ireo zoro any Chili
Fiarabe tany Kolombia
Kolontsaina ao Paragoay
Visa ho any Colombia
Justin Bieber dia nanao tatoazy toa an'i Beckham
Tora-miaro ho an'ny bisikileta
Broccoli - sakafo mahandro
Pamekan'i Pamela Anderson nandefa dokambarotra ho an'ny eco
Musées de Geneva
Ahoana ny famokarana akorandriaka?
Tena ilaina ve ny halva?
Mickey Rourke - biography sy fiainana manokana
Ny andron'i Catherine Lehibe
Nahoana no manonofy mainty ny mainty hoditra?
Tombo-kena voajanahary voa maina
Shish kebab ao karski
Lotion amin'ny tarehy
Fety Pirate - akanjo ho an'ny zazavavy
Fanafody fanasitranana ao amin'ny toeram-pivoahana
Rahoviana ny hanao HCG amin'ny faran'ny taolam-biby fahiny?
Ahoana no hanamboarana savony?
Andro famoahana ny hoditra - ireo safidy mahomby indrindra
Brush sprouts - cultivation
Tuberkulosis amin'ny hazavana